वंशजलाई प्रष्ट परिभाषित गर्न सांसदको माग,वंशज बाबु मात्र वा आमा पनि ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रवारको बैठकमा सांसदहरूले नागरिकताका सम्बन्धमा वंशजको प्रष्ट परिभाषा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले वंशज भनेको बाबु मात्र हो वा आमा पनि हो भन्ने विषयमा कानून बनाउन प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले नागरिकताका सम्बन्धमा वंशजको प्रष्ट परिभाषा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संशोधनकर्ता सांसद बिन्दा पाण्डेले नागरिकतामा वंशज विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताइन् । ‘वंशजका आधारमा नागरिकता भनिएको छ, वंशज भनेको बाबु मात्रै हो वा आमा पनि हो, यसको परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्‍यो ।’नागरिकतासम्बन्धी नीति संविधानसँग बाझिएको हुनाले संशोधन गर्न जरुरी भएको र अनाथ बालबालिकाका लागि जसले संरक्षण गरेको हुन्छ उसैले नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
संशोधनकर्ता सांसद पवित्रा निरौला खरेलले वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेर बाबुलाई प्राथमिकता दिने गरेको हुँदा आमालाई पनि त्यस्तो अधिकार दिने खालको कानून बनाउनुपर्ने बताइन् ।
समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले दफाबार छलफल गरेर सो विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइने जानकारी दिइन् । तीन दिनदेखि सो समितिमा नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । संशोधनका लागि ५५ सांसदले १०२ संशोधन हालेका छन् ।
विद्रोह नियन्त्रण गरेको दाबी
काठमाडौं। टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताहिप एर्दोआनले सैनिक विद्रोह नियन्त्रण भइसकेको दाबी गरेका छन्।सीएनएनका […]
‘म प्रियंका जस्ती लोभी छैन’
बलिउड नायिका करिना कपुरले अर्की नायिका प्रियंका चोपडालाई लोभी भनेर टिप्पणी गरेकी छिन् । ‘क्वान्टिको’ स्टार […]
डा. उपेन्द्रको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अस्पताल बोल्यो
काठमाडौं । वरिष्ठ न्यूरोसर्जन उपेन्द्र देवकोटा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका कारण उपचार गराइरहेका छन् । […]
असार ११ । काठमाडौँ, तपाईंलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, एकमुठा सागभन्दा कपडा सस्तो हुन्छ भनेर । तर […]